Amanqaku kaGeorge Fakorellis Martech Zone |
Amanqaku ngu UGeorge Fakorellis
UGeorge ngu Indibaniselwano yoKwazisa ngentengiso usebenzela Isoftware ezenzekelayo ye-imeyile! Uyakuthanda ukubhala malunga nokuThengisa kwiXesha leDijithali kunye nokukhula okufumanisayo kuphando lwakhe lwemihla ngemihla. Usoloko enomdla wokuthetha ngamava kunye nemibono ukuze uzive ukhululekile ukumshiya umyalezo ukuze wabelane ngolwazi lwakho olunomdla.
NgeCawa, ngoFebruwari 17, 2019 NgoMvulo, Februwari 18, 2019 UGeorge Fakorellis
I-Moosend, intengiso ye-imeyile enikezelweyo kunye neqonga lokuzenzekelayo, ichaze iimpawu zentengiso ye-imeyile, izicwangciso zamaxabiso, kunye nexabiso lemali ngokungaguquguquki, ukuzinikela ekugqweseni, kunye nokusebenza kwenkxaso yabathengi. Kwisithuba nje seminyaka esi-8, i-Moosend ikwazile ukuseka ubukho behlabathi kunye neearhente ezikumgangatho ophezulu kunye neenkampani zamazwe aphesheya ezinje ngeTed-X, kunye ne-ING, ukubala nje ezimbalwa. I-Moosend yayiliqonga lokuqala kolu shishino ukuba liqinisekiswe nge-ISO kunye nokuhambelana ne-GDPR, oko kungqina ukuba iindlela zalo